अनमोलको ‘क्याप्टेन’ ले ४ दिनमा कति कमायो ? - २१ फाल्गुन २०७५, NepalTimes
अनमोलको ‘क्याप्टेन’ ले ४ दिनमा कति कमायो ?
काठमाडौँ, फागुन २१
अनमोल केसी अभिनित फिल्म ‘क्याप्टेन’ ले सोमबारसम्म साढे ३ करोडको व्यापार गरेको छ । वितरक मनोज राठीका अनुसार यो फिल्मले चार दिनमा ३ करोड ४० लाख ग्रस कलेक्सन गरेको हो । फिल्मले काठमाडौं र मोफसलबाट बराबरको व्यापार गरेको वितरकले राठीले बताए ।
‘पहिलो दिन धेरैको कलेक्सन खासै राम्रो थिएन, तर शनिवारबाट फिल्मले राम्रो व्यापार गरेको छ ।’, राठीले भने । फिल्मले शनिबार ६५ लाख, शनिबार १ करोड २५ लाख, आइतबार ५० लाख र सोमबार झण्डै १ करोडको व्यापार गरेको हो ।
नेपालमा सुपरहिट भनिएका चलचित्रले गर्ने व्यापार ‘क्याप्टेन’ ले चार दिनमै गरेको वितरक राठीले दाबी गरे । चलचित्रमा अनमोल केसीले राष्ट्रिय खेलाडीको भूमिका निभाएका छन् ।
यस्तै फिल्ममा सुनील थापा, प्रशान्त ताम्राकार, उपासना सिंह ठकुरी, प्रियंका एमभी, विल्सन विक्रम राई, लगायतका कलाकारको पनि अभिनय छ । दिवाकर भट्टराईको लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्ममा भुवन केसीको निर्माण छ । समीक्षात्मक कोणमा भने यो फिल्मले खासै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छैन ।